ကလေးများအတွက်အာဟာရ အကြုံပြုချက် – Pediasure
သူတို့ကြီးထွားလာသည့်နှစ်များတွင် ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့၊ အထူးသဖြင့် အာဟာရကောင်းကောင်းရရှိဖို့နှင့် သူတို့လိုအပ်သည့်အကူညီများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကဲ့သို့ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်း နှင့် ကျန်းမာသောအဆီတို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကဘာလဲ? ကလေးတွေက ဘာပိုစားသင့်သလဲ?
အောက်တွင်ကလေးများအတွက် အကြုံပြုထားသော အာဟာရနှုန်း ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ကယ်လိုရီများရေတွက်ခြင်းသည် လူကြီးများအတွက် အစာကျွေးရာတွင် ရေပန်းစားသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ ကလေးများအတွက်ပါသင့်တော်သည်။ ၎င်းသည် အသက်အရွယ်၊ ကျား၊မ၊ လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အထများ၊ ကာယလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ( အပူပိုင်း၊ သဲကန္တရ၊ ဝင်ရိုးစွန်း၊ မြို့ပြ၊ ကျေးလက်) စသဖြင့်ကွဲပြားသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှ စ၍ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အထိ ကလေးများသည် တစ်နေ့လျှင် ကယ်လိုရီ ၉၀၀ မှ ၁၈၀၀ ခန့်အထိ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် ကယ်လိုရီ ၂၆၀၀ ထိပင် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤကယ်လိုရီများသည် သစ်သီများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ နှင့် သကြားတို့မှ ရသင့်သည်။
ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် အစားအစားတစ်ခု၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ကယ်လိုရီ အလွတ်မပါသည့် အာဟာရဓာတ်များ များပြားသော အစားအစာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ အများဆုံးကျွေးခြင်းသည် ကလေးတစ်ဦးစီ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်တွင် မူတည်လိမ့်မည်။ သို့သော် အောက်တွင် အစားအစာ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ အနည်းဆုံးပါဝင်သင့်သည့် ပမာဏကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အသီးအနှံများ – အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ် ( ၁ ခွက်မှ ၂ခွက်ခွဲခန့်)။ ၎င်းသည် ကလေးများအတွက် Vitamin A, C၊ ပိုတက်ဆီယမ် နှင့်အမျှင်ဓာတ်များကောင်းစွာပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည် များ (သို့မဟုတ်) အသီးအနှစ်များပါဝင်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ – အရောင်မျိုးစုံပါဝင်သောအရွက်များ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ အမြစ်များ နှင့် အခြားအရာများရောနှောပြီး အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ် ( ၁ ခွက်မှ ၃ ခွက်ခွဲ) ထိပါဝင်သင့်သည်။ ၎င်းသည် သစ်သီးများမှ ရနိုင်သောအလားတူ ဗီတာမင်များနှင့် သတ္တုဓာတ်များကို အစားထိုး ရွေးချယ်နိုင်သော အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။
အစေ့အဆန်များ – ကလေးများအတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၆ ကြိမ် ( ၁ခွက်၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံမှ ၁ခွက်ခွဲ) အထိကျွေးပါ။ အကယ်၍ဖြစ်နိုင်လျှင် အစေ့အဆန် ( ဂျုံလုံး၊ အုတ်ဂျုံ၊ ဆန်လုံးညို၊ နှံစားပြောင်း) တို့ကိုသာ ကျွေးပါ။ သန့်စင်ထားသော အစေ့အဆန်များကို ကျွေးနိုင်သော်လည်း နေ့စဉ်ကျွေးမှု၏ ထက်ဝက်ခန့်မပိုသင့်ပါ။ ( Vitamin B (သို့) ဖောလစ်အက်စစ်၊ အမျှင်ဓာတ်နှင့် သံဓာတ်တို့ကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ထားသည်။)
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ – ပိုတတ်ဆီယမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော့စဖောရပ် နှင့် ပရိုတင်းဓာတ် တို့သည် ကြီးထွားမှုနှင့် ကြီးထွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ် ( ၂ ခွက်မှ ၃ခွက်) အထိကျွေးသင့်သည်။ ၎င်းသည် နို့တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲ၊ ပဲ သို့မဟုတ် အခွံမာထုတ်ကုန်များနှင့် အားဖြည့်အစားအစာများတွင် လည်း ပါဝင်ပါသည်။
ပရိုတင်း – ပင်လယ်စာများ၊ အဆီမပါသောအသား၊ ကြက်သား (သို့) သက်သတ်လွတ်အသားကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ် ( ၅၆ ဂရမ် မှ ၁၄၂ ဂရမ်) အထိကျေးပါ။ ပရိုတင်းဓာတ်သည် ကြွက်သားကျန်းမာရေး၊ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးနှင့် တစ်နေ့တာပြည့်ဖြိုးမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤပရိုတင်းအရင်းအမြစ် များနှင့်အတူ သင်၏ကလေးသည် သံဓာတ်၊ ဇင့် နှင့် ဗီတာမင် ဘီ အချို့ကို ရရှိပါလိမ့်မည်။
သကြား၊ ဆိုဒီယမ်၊ ဆီများနှင့် အခြားအဆီများသည် သေချာပေါက်ဆိုးရွားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဟင်းချက်ရာတွင် ဆီပါဝင်မှုသည် တစ်နေ့လျှင် ၂၇ ဂရမ်ထက် မပိုသင့်ပါ။ ၎င်းသည် ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့လျှင် စားသုံးမှု၏ 1/6 အောက်သို့ဆင်းရပေမည်။ အဆီများသော သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲထားသောအဆီများ နှင့် ဆိုဒီယမ် အလွန်အကျွံများသောအရာများသည် အများအားဖြင့် ပြုပြင်ထားသော အသားများနှင့် ထုတ်ပိုးထားသော စားစရာများ ( သို့မဟုတ်) ကြော်ထားသောအရာများမှအများဆုံးတွေ့ရသည် ထို့ကြောင့် အဆီနည်းသော၊ လတ်ဆတ်သော၊ ပေါင်းထားသော၊ ဖုတ်ထားသော သို့မဟုတ် ပြုတ်ထားသောအရာများကို ရွေးချယ်ပါ။ ဤအရာများကို ရှောင်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ အစားအစာ အမှတ်တံဆိပ်များကို ဖတ်ရှုပြီး အာဟာရတန်ဖိုးဇယားကို အမြဲကြည့်ရှုပါ။